Fitaovana vy - Mestech Industrial Limited
Ny ampahany vy dia vy, vy, vy vita amin'ny vy, akorany vy, sns. izay vita amin'ny vy.
Fitaovana amin'ny vy: metaly vy sy tsy vy (na metaly tsy ferrous). Ny metaly dia manana fananana tena tsara izay fitaovana tsy metaly toy ny plastika, hazo, fibre sns, izay tsy azo soloina amin'ny vokatra indostrialy
1. Fitondra-tena tsara, ampiasaina hanamboarana faritra azo ampiasaina, toy ny rotor moto, switch elektrika, socket.
2. Fitaovana mafana tsara, azo ampiasaina hanamboarana ireo ampahany amin'ny hafanana amin'ny fitaovan'ny milina, toy ny filentehan'ny hafanana, ny masinina, sns.
3. Plastika tsara, mety ho fanodinam-plastika amin'ny metaly, ampahany amin'ny masinina amin'ny endriny maro samihafa.
4. tsara weldability.
5. Ireo akora vita amin'ny metaly dia manana toetra mekanika avo lenta, tanjaka sy hamafisana.
6. Ny metaly dia manana teboka miempo avo ary afaka mahay ny tontolo iainana mari-pana ambony.
7. Ny faritra metaly dia afaka mahazo ny refy sy ny kalitaon'ny refy, izay matetika ampiasaina hanamboarana ny masinina.
Ny faritra metaly dia be mpampiasa amin'ny fitaovana mekanika, fitaovana elektronika, fanamboarana sambo, fiaramanidina ary fanaka an-trano. Ny ampahany vy ataontsika ho an'ny mpanjifantsika dia ireto manaraka ireto: Shaft, gear, die casting, sinter, metal sheet
Sady maty anjara
Faritra vy tsy misy fangarony
Ny ampahany maty amin'ny aliminioma
Zinc firaka maty maty anjara
Ny teknolojia fanodinana ny faritra vy, ny milina, ny fitomboka, ny fanariana marina, ny metalyurgie vovoka, ny famolahana ny tsindrona vy, ny milina laser, ny EDM, ny milina ultrasonic, ny milina elektrokimia, ny masinina ary ny milina haingam-pandeha avo lenta. Mitovy amin'ny fihodinana, fikosoham-bary, fisolokiana, fanariana, fikosoham-bary, machining CNC, ivon-toeran'ny CNC CNC CNC no fanodinana mahazatra.
1. Fitsaboana anti-harafesina sy fanoherana ny harafesina: ny manga mainty sy mangotraka mangotraka dia antsoina koa hoe fitsaboana phosphating, ka ny faritra metaly dia misy fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny harafesina.
2. Fitsaboana mafy: ny fomba fitsaboana hampitomboana ny hamafin'ny faritra vy: ampiakarina ny carburization ambonimbony mba hampitombo ny hamafin'ny faritra metaly, ary ho lasa mainty ny lokon'ny faritra aorian'ny fandrehitra azy; ny fitsaboana famonoana olona dia afaka mampitombo ny hamafiny;
3. ny fitsaboana hafanana banga dia afaka manatsara ny hamafin'ny ankapobeny.
Mestech dia manome ny mpanjifa ny famolavolana sy ny fanodinana ireo faritra vy, firaka aliminioma, firaka varahina, firaka zinc ary faritra vy hafa. Raha manana vokatra vy sy faritra hividianana ianao dia mifandraisa aminay.